Homeसमाचारओली प्रचण्ड र देउवालाई चे’तावनि, ख’बरदार त्यो रेशम चौधरीलाई छुटाउने होइन (भिडियो सहित)
March 16, 2021 admin समाचार 5616
आखिर को हुन् रे’शम चौधरी ? किन जसपाले उनको रिहा,इलाई मुख्य शर्त बनायो ? उनको रि,हाइ सो’चेजति सजिलो छ ? हामीले यी प्रसंगहरु के’लाएका छौं । दुई बर्ष अगाडिको कुरा हो । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले समर्थन फिर्ता लिने र आ,न्दोलनमा उत्रने चेता,वनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओ’लीले टीकापुर घ,टनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशम चौध’रीलाई डिल्लीबजार कारा,गारबाट सिंहदरबार पुगेर सांसदको सपथ लिने अवसर जु’टाइदिए ।
१९ पुस २०७५ मा रेशम’को सपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत थियो । एमाले र माओ’वादी केन्द्र कित्तामा विभाजित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा छ र कुनै पनि बेला माओवादी केन्द्रको पहलमा अर्को गठब’न्धन बन्न सक्छ ।
त्यसैले उनी आफ्नो नेतृ’त्वको सरकार बचाउन एक मात्र अस्त्रको रुपमा जनता समाज’वादी पार्टी (जसपा) लाई रिझाउन खोजिरहेका छन् । त्यसको केन्द्रमा छन्, जन्मकै,दको स,जाय भोगिर’हेका सांसद रेशम चौधरी । – इताजा खबरबाट
March 23, 2021 admin समाचार 4763
April 11, 2021 admin समाचार 5830
June 7, 2021 admin समाचार 4288